Soosaarayaasha & Shirkadaha Dhalada Khamriga Cas - Shiinaha Warshadda Dhalada Khamriga Cas
Tayada dhalada dhalada galaas khamri fur fur tayo sare leh
Waxaan u qaadaneynaa "macaamil-saaxiibtinimo, ujeedo tayo leh, isdhaxgal, hal abuurnimo" ujeeddooyin. "Runta iyo daacadnimada" waa maamulkeenu ku habboon yahay bixinta dhalada jumlada jumlada ah, oo saameyn ku leh suuqa dhismaha ee deg degga ah ee cunnada iyo cabbitaannada degdegga ah ee adduunka oo dhan, waxaan dooneynaa inaan la shaqeyno la-hawlgalayaasha / macaamiisha si aan natiijooyin wanaagsan u wada helno. Hoos u dhig qiimaha dhalada jumlada jumlada ah, in ka badan 20 sano, .Shirkado khibrad leh oo ka socda adduunka oo dhan ayaa noo qaata inay yihiin lamaanayaashooda muddada dheer iyo kuwa deggan. Waxaan ilaalinaynaa xiriir ganacsi oo waara oo lala yeesho in ka badan 60 dal.
Midab Daabacid Qaab Qaas ah Loogu Sameeyay Waraaqaha Dhalada Qamriga
Waxaan ku sii wadaynaa aragtida ah "tayada ugu horreysa, adeeg bixiyaha marka hore, horumar joogto ah iyo hal-abuurnimo si aan ula kulano macaamiisha" oo leh maareynta iyo "cillad eber, cabashooyin eber" sida ujeeddada caadiga ah Tilmaantaadu waa awoodeena koronto weligeed ah! Si diirran ugu soo dhawow macaamiisha gurigaaga iyo dibaddaba inaad u tagto ururkeenna. Waxaan sii wadi doonnaa inaan nafteena u hurno suuqa & horumarinta wax soosaarka isla markaana aan u dhisno adeeg wanaagsan oo isku xidhan macaamiishayada si aan ugu abuurno mustaqbal barwaaqo badan. Xusuusnow inaad nala soo xiriirto si aad u ogaato sida aan u wada shaqeyn karno
Keen dhalo khamri burgundy premium
Waxay leedahay taariikh amaah shirkadeed oo wanaagsan, kaalmaynta iibka kadib iyo tas-hiilaadka wax soo saarka casriga ah, hadda waxaan kasbannay heer aad ufiican iibiyaashayada adduunka oo dhan qiimo fiican iyo tayo wanaagsan. Dhaladayada dhalada ah ee dhalada ah ee '750 Ml amber galaas burgundy ah oo loo habeeyay Qiimo aad u weyn, tayo sare leh oo heer sare ah, keenis deg deg ah iyo adeegyo la isku halleyn karo ayaa la damaanad qaadayaa. Si naxariis leh aan u ogaanno shuruudahaaga tirada si aan kuugu soo sheegno qiimaha si waafaqsan. Hadda, horumarka internetka, iyo isbeddelka caalamiga ah, waxaan go'aansanay inaan ganacsiga ku fidino suuqyada dibedda. Iyada oo la soo jeedinayo in macaash badan la keeno macaamiisha iyagoo si toos ah wax u siinaya.
Dhalada burgundy dhalada khamriga cas
In si joogta ah kor loogu qaado barnaamijka maamulka iyada oo loo hogaansamayo sharciga "si daacad ah, iimaan aad u wanaagsan oo tayo sare leh ayaa ah saldhigga horumarinta ganacsiga", waxaan si ballaaran u nuugeynaa nuxurka alaabooyinka la xiriira ee caalamiga ah, waxaanna si joogto ah u horumarinnaa alaabooyin cusub si loo buuxiyo baahida macaamiisha. Wax soosaarkayaga iyo xalkayagu si ballaaran ayaa loo aqoonsan yahay oo lagu kalsoonaan karaa dadka isticmaala sidoo kale waxay si joogto ah ula kulmaan baahiyaha dhaqaale iyo bulsho ee isbedelaya. Siinta qiimo aad u fiican oo dhalo dhalo ah, dhalada khamriga, qanacsanaanta iyo sumcadda wanaagsan ee macaamil kasta ayaa ah mudnaantayada. Waxaan diiradda saareynaa faahfaahin kasta oo ka baaraandegidda dalbashada ah ee macaamiisha illaa ay ka helayaan alaab ammaan ah oo qumman oo leh adeeg saad wanaagsan iyo kharash dhaqaale. Waxay kuxirantahay tan, waxsoosaarkayaga waxaa si wanaagsan loogu iibiyaa dalal badan.
Dhalada Warshadda Xayeysiinta Shiinaha Wareeg 750ml Cagaaran Dhalada Khamriga Bordeaux Glass
Waxaan ku sii soconeynaa mabda'a ah "tayada bilowga ah, adeegga ugu horreeya, horumarinta joogtada ah iyo hal-abuurnimada si loola kulmo macaamiisha" maamulka iyo "eber cillad, cabashooyin eber ah" oo ah ujeeddada tayada. Waxaan hadda sugeynaa xitaa wada-shaqeyn ballaaran oo lala yeelanayo macaamiisha oo ku tiirsan faa'iidooyinka la isku daray. Markaad xiisaynayso alaabtayada, hubi inaad nala soo xiriirto si aad u hesho xaqiiqooyin dheeraad ah. Dhalada khamriga ee bordeaux Shirkadeenu waxay leedahay nidaam maamul oo hagaagsan iyo nidaamka adeegga iibka kadib. Waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno macaamiisha kala duwan gudaha iyo dibaddaba si aan u helno mustaqbal wanaagsan oo wanaagsan.
OEM / ODM-saaraha Shiinaha 750ml Madow Cagaaran Bordeaux Dhalo Glass Dhalo
Xalalkayagu si ballaadhan ayaa loo oggol yahay uguna kalsoon yahay adeegsadayaasha ugu dambeeya waxaana laga yaabaa inay la kulmaan baahiyaha macaamiisha ee shuruudaha OEM / ODM Haddii ay dhacdo inaad raacdo tayada Hi-ga, Hi-deggan, qiimaha qiimaha Nice, JUMP ayaa ah doorashadaada ugu weyn! Waxyaabaha Saldhigga ah: Nooca Wax Lagu Xidho Muraayadda: Fure ama sida looga baahan yahay Muunad: La siiyay OEM / ODM: Midab Cap oo la aqbali karo: Qaab Midabaysan oo La Habeeyey: Wareeg
750 ml bordeaux taper dhalada khamriga galaaska ah
Qabashada dusha ： Daabacaadda shaashadda, dubista, daabacaadda, qashin-gooynta, xardho, electroplating iyo midab ku buufinta decal, decal, iwm Isticmaalka Warshadaha: Khamri cas, biir, cabitaan, champagne wine khamri baraf ah, iwm shuruudaha looga baahan yahay: Bixinta OEM / ODM: Midab Cap oo La Aqbali Karo: Qaab Midab Loo Habeeyey: Wareeg
Dhalooyinka khamriga ee Bordeaux
Midabka: Madoow, cagaar, hufan, amber ama la habeeyay Qaado masuuliyad buuxda si aad ula kulanto dhammaan dalabaadka macaamiisheenna, ku guuleysato horumar isdaba-joog ah adiga oo kor u qaadaya koritaanka macaamiisheenna. Noqo lamaanaha iskaashatada macaamiisha oo ku badso danaha macaamiisha khamriga bordeaux champagne qiimo fiican. Na dooro, kaagama dhigi doonno inaad ka qoomameyso! Dhalada khamriga ee qiimaha ugu jaban, khamri cas, oo hadafkiisu yahay "cillad eber ah" .Waxaan si diirran u soo dhaweynay saaxiibbada adduunka oo dhan inay soo booqdaan oo na hagaan si aan wadajir ugu guuleysanno yoolka guusha.
Dhalada khamriga ee Bordeaux oo leh dabool fur
Furaha guusha waa "Tayada wax soo saarka wanaagsan, Qiime macquul ah iyo adeeg hufan". Waxaan guud ahaan rajeyneynaa sameynta ururo ganacsi oo wax ku ool ah macaamiil cusub oo adduunka ah. Waxaan bixinaa dhalo khamri dhalo ah oo tayo wanaagsan leh, waxay leeyihiin qiimo fiican oo aan laga guuleysan karin iyo adeegga ugu fiican. Ku soo dhowow inaad noo soo dhejiso shaybaarkaaga iyo giraan midab ah markaa waxaan soo saari doonnaa alaabada sida aad u codsatay. Haddii aad xiiseyneyso wax soo saar kasta oo aan bixinno, fadlan si xor ah ayaad noola soo xiriiri kartaa boostada, fakiska, taleefanka ama internetka. Waxaan halkaan u joognaa inaan ka jawaabno su'aalahaaga Isniinta ilaa Sabtida waxaanna rajeyneynaa inaan kula shaqeynno.
Sumcad Sare Shiinaha Dhalada Wine Dhalo750ml Bordeaux Dhalo
Dukaankeena shaqada waxay leeyihiin dubista, daabacaadda, qabow barafoobay, carbinta ˴ xardho ˴ electroplating iyo midab xereynta iwm qoto dheer wax soo saarka wax soo saarka, waxay bixin kartaa mid ka mid ah alaabada dhalada ah, sidoo kale waxay siin kartaa dhalada dhalada ˴ calaamadeynta dhalada quraaraddeena si wadajir ah macaamiisha looga baahan yahay. Dhalada ruuxiisa bottle dhalada khamriga bottle dhalada biirka jar dhalada galaaska ˴ dhalada sharaabka bottle dhalada cuntada ˴ kaladuwanaanta sare iyo kuwa dhexe ee dhalooyinka khamriga ah oo qaas ah, maadada buluuga ah material wax madmadow leh weelka jarjarka ˴ dhalada cabitaanada fudud ˴ mishiinka wax lagu shubo jar weel dhalo ah oo kala duwan ayaa ah badeecadayada caanka ah. Sidoo kale soo saar muraayadaha dhalada sare ee borosilicate-ka ah kuwaas oo sifiican ula jaan qaadi kara microwave-ka iyo mashiinka dharka lagu dhaqo, wuxuu leeyahay heerkul u adkeysanaya kuleylka oo ka sareeya 250 ℃. Nidaamka wax soosaarka adag wuxuu bixiyaa hubin tayo leh.
Dhalada khamriga dhalada khamriga dhalada khamriga burgundy
Caadi ahaan macaamiisha u janjeedha, waana u jeedkeenna ugu dambeysa ee ah inaannaan noqonin oo keliya kuwa ugu masuulka ah, laakiin sidoo kale inaan noqonno bixiye lagu kalsoon yahay oo daacad ah, waxaan u siineynaa macaamiisheena qiimo jaban iyo kooxdayada farsamada ee xirfadda leh waxaa laga yaabaa inay si kal iyo laab ah ugu adeegaan adeeggaaga. Waxaan si kal iyo laab ah kuugu soo dhaweynay inaad soo booqato degelkeena iyo ganacsiga oo aad noo soo dirto weydiintaada. Dhalada dhalada ah oo tayo sare leh oo ku jirta JUM. Xakamaynta tayada adag waxaa lagu fuliyaa xiriir kasta oo ka mid ah wax soo saarka oo dhan.Waxaan si daacad ah u rajeyneynaa inaan ku dhisno iskaashi saaxiibtinimo iyo mid wadaag ah Iyada oo ku saleysan xalal tayo sare leh iyo adeegga iibka ka hor / iibka kaamil ah, macaamiisha qaar ayaa nala shaqeynayay in ka badan 20 sano.
OEM ODM dhalooyinka quraaradaha khamriga ee burgundy cagaaran ee qadiimiga ah oo leh dusha sare ee guf
Tayo sare Marka ugu horeysa, iyo Macaamilka Sare waa tilmaamkeena si aan u siino adeegga ugu faa iidada badan macaamiisheena. Waqtigan xaadirka ah, waxaan isku dayeynaa kan ugu weyn inaan ka mid noqono kuwa ugu badan ee dhoofiya aaggeenna si aan u fulino iibsadayaasha aad ugu baahan baahida ah dhalada khamriga burgundy. Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhaweynay macaamiisha adduunka oo dhan inay na soo booqdaan, iskaashigeenna dhinacyada badan leh oo aan ka wada shaqeyno sidii loo horumarin lahaa suuqyo cusub, loo abuuri lahaa mustaqbal guul-guul leh. Kooxdayadu waxay si fiican u yaqaanaan dalabaadka suuqa ee dalal kala duwan, waxayna awood u leeyihiin inay keenaan badeecado tayo leh oo ku habboon qiimaha ugu fiican suuqyada kala duwan. Shirkadeena waxay horey u sameysay koox xirfad leh, hal abuur leh oo masuul ka ah u adeegida macaamiisha.
Jar Kaydinta Saliida Olive, Dhalo Saliid Cagaaran, Dhalo Saliid saytuun ah, Dhalada Saliida Saliidda ah ee 250ml, Dhalo Saliid saytuun ah, Saliida Zeytuunka Iyo Khamriga Qamriga,